The Gardener: 2009-12-27
The Bottom Billion (အပိုင်း ၂)
ကလေးတွေဖတ်ရမှာပျင်းမှာစိုးလို့ လေးလံတာတွေကို အတတ်နိုင်ဆုံးလျော့ပြီးရေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့အတွက် ဒီဆောင်းပါးတွေဟာ ပေါ့တော့တော့ဖြစ်နေပါတယ်။ ... သိပ်လေးပြီး ကလေးတွေမဖတ်ချင်လောက်အောင် ဖြစ်မှာစိုးလို့ အများကြီးပယ်လိုက်ပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း တူတွေ၊တူမတွေရှိတဲ့အတွက် သူတို့ကြီးလာရင် မူရင်းစာအုပ်မဖတ်နိုင်ခင်စပ်ကြားမှာ ဖတ်သင့်တာလေးတွေ ဖတ်စေချင်ပါတယ်။
ကျွန်တော်ငယ်တုန်းက မုံရွေးက စာစဉ်တွေသဘောကျပါတယ်။ သိပ္ပံစာစဉ်လေးတွေ အမြည်းလိုရေးထားတာသဘောကျပါတယ်။ ဘာမဆို အသေးစိတ်မသိရင်တောင် နည်းနည်းပါးပါးတော့သိချင်ပါတယ်။ သိပ္ပံပညာ ဘယ်လောက်တိုးတက်နေပြီလဲ ... Genetic Map တွေအားလုံးစုံသွားရင် ရောဂါအားလုံးကုလို့ရတော့မလား အဲဒါတွေကို စိတ်ဝင်စားပါတယ်။
အခုနည်းနည်း ဖြန့်ခင်းချင်တာက Chapter7။ Aid to Rescue? နဲ့ပတ်သက်တာလေးတွေပါ။ ကယ်ဆယ်စောင့်ရှောက်ရေးအကူအညီတွေ အလုပ်ဖြစ်လား .. မဖြစ်လား .... နည်းနည်းပြောကြတာပေါ့။
လူငယ်တွေအနေနဲ့ ပညာကို Asset တစ်ခုလို့ သဘောထားစေချင်ပါတယ်။ Asset ဆိုတာကို ဘယ်လိုဘာသာပြန်ကြလဲမသိဘူးဗျ။ တစ်ခါတစ်လေ မူရင်းအတိုင်းလောက် မကောင်းတဲ့ ဘာသာပြန်ချက်တွေကို မမှတ်ထားဖြစ်ဘူး။ Assets ဆိုတာ အရင်းတစ်ခုခုပေါ့ဗျာ ...။ မြေ၀ယ်ထားတယ်ဆိုရင် အဲဒီမြေဟာ ပိုင်ဆိုင်မှု အရင်းတစ်ခုပဲ ...။ ဈေးတက်လာနိုင်တယ်။ အသုံးကျလာနိုင်တယ်။ အဲဒီလို တစ်ချိန်မှာ အကျိုးအမြတ်ရနိုင်တဲ့ အရင်း၊ ပိုင်ဆိုင်မှုမျိုးကို Asset လို့ခေါ်ကြပါတယ်။( software ကို အပျော့ထည်လို့ ဘာသာပြန်တာလောက် အူကြောင်ကြောင်နိုင်တာမရှိဘူးလို့ ခံယူတဲ့အတွက် မလိုအပ်ဘဲ ဘာသာပြန်ထားတာတွေကို ဆန့်ကျင်ပါတယ်။) ပညာက ရောင်းစားပေါင်စားလို့တော့ရချင်မှရမယ် ....။ ငိုနေတဲ့ ကလေးအတွက် ဈေးကြီးတဲ့ နို့မှုန့်ဗူးတွေ ဖန်တီးနိုင်ချင်မှဖန်တီးနိုင်မယ် ...။ မနက်ဖြန်စားဖို့ လုံလောက်တဲ့ ငွေကြေးကို အိတ်ထဲမှာ အမြဲပြည့်နေအောင် လုပ်ပေးနိုင်ချင်မှလုပ်ပေးနိုင်မယ်။ ဒါပေမယ့် ပညာသင်တာကို အလကားလို့တော့ ဘယ်တော့မှမထင်ပါနဲ့ ...။ ကျောင်းပညာရေးဟာ ပညာအားလုံးတတ်လာမယ်လို့ အာမမခံထားတဲ့အတွက် သိပ်အများကြီးတော့မမျှော်လင့်ထားပါနဲ့။ အခုဖတ်နေတဲ့ကျောင်းသားဟာ ပထမနှစ်ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် sophomores တွေလည်း ဖြစ်ချင်ဖြစ်မယ် ...။ ဒါပေမယ့် ကိုယ်ဘွဲ့ရပြီးရင် ဘာလုပ်မလဲ ဆိုတာကို တွေးထားပါ။ ငါဘွဲ့ရရင် နိုင်ငံခြားသွားမယ်လို့စိတ်ကူးထားတဲ့သူက ဘယ်နိုင်ငံသွားပြီး ဘာလုပ်မယ်ဆိုတာကို တွေးထားပါ။ ကျောင်းဆက်တက်မယ်ဆိုရင် လိုအပ်တဲ့ English စာ အရည်အချင်းအတွက် Toefl နဲ့ IELTS လို သေချာခိုင်မာတာ တစ်ခုခုကို ဖြေဖို့ပြင်ဆင်ထားပါ။ တကယ်တမ်းကြတော့ ကျောင်းတက်ရတဲ့ လေးငါးနှစ်ဟာ ခဏလေးပါပဲ ...။ ကျောင်းပြီးသွားလို့ဘွဲ့ရတဲ့အခါ ပထမဆုံး ကိုယ့်ကိုယ်ကို သတိထားမိတာကတော့ ရေနစ်နေတဲ့ပုရွက်ဆိတ်တစ်ကောင်နဲ့ ဘာမှမကွာပါလားဆိုတဲ့အတွေးပါပဲ။ တစ်ခါတစ်လေ Aid to Rescue ဆိုတာ ကံတရားနဲ့ နှစ်ဦးသဘောတူစေ့စပ်ထားတဲ့ မနက်ဖြန်လှလှလေးတစ်ယောက်ဖြစ်နိုင်သလို ....၊ ကံတရားနဲ့ ကွာရှင်းထားတဲ့ ကံဆိုးမတံဆိပ်နဲ့ ဖုန်းဆိုးမြေ တစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဘွဲ့ရအလုပ်လက်မဲ့ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာ တကယ်တမ်းမှာ ထင်တာထက်ခါးပါတယ်။ ထင်ထားတာနဲ့ လက်တွေ့ဘ၀နဲ့ ကွာနေတာဟာ ခံစားရခက်ပါတယ်။
အခု Singapore က NTU, NUS နဲ့ SMU ကနေ မြန်မာပြည်က ထိပ်တန်းကျောင်းသားတွေကို ပညာတော်သင် အစီအစဉ်လုပ်နေပြီဆိုတော့ မြန်မာပြည်က ညီ၊ ညီမတွေအတွက် ၀မ်းသာပါတယ်။ တကယ်တန်း တော်တဲ့သူတွေအတွက် ရသင့်ရထိုက်တာ ရနိုင်တာကောင်းတယ်။ ထိုက်တန်တဲ့သူရတာ ကောင်းတယ်။ ကြိုးစားပြီး တစ်ခုမှ မရနိုင်တဲ့နေရာမှာ ကြိုးစားရတာ ဘယ်လောက် ပျင်းစရာကောင်းမလဲ။ အကန့်အသတ်နဲ့လေ့လာရတာကို ဘယ်လောက်တောင်ငြီးငွေ့မလဲ။ ကိုယ်တကယ်သိချင်တာတွေ တကယ်သိအောင် ပြောမပြနိုင်မှန်းသိရတဲ့အခါ ဘယ်လို ခံစားရမလဲ .....။ ဒါတွေကိုပြောတိုင်း ကိုယ်ချင်းစာမိတယ်။ တကယ်လို့ PC မှာ processor ဖြုတ်လဲတဲ့အကြောင်းကို စာကျက်ပြီးဖြေနေရတာဟာ ဘယ်လောက် အဓိပ္ပာယ်ကင်းမဲ့သလဲ ဆိုတာ သိဖို့ကောင်းတဲ့လူတွေ သိစေချင်တယ်။ ကလေးတွေအားလုံး Lab မှာ Processor တစ်လုံးစီတပ်ပြနိုင်ရင် ဒီတစ်ပုဒ်ကို အောင်မှတ်ပေးဖို့ကောင်းတာပေါ့။
.... အဲဒီအချိန်ကတော့ Aid To Rescue တွေရောက်မလာခဲ့ဘူး။ ... အဲဒီတုန်းက တခါတလေ တွေးမိတယ် .. ငါတို့နိုင်ငံဟာ တလွဲဆံပင်ကောင်းလွန်းတဲ့နိုင်ငံတွေထဲမှာ တစ်ပဲလို့ ....။
ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေမှာ ထောင်ချောက်လေးခုက ရုန်းမထွက်နိုင်လို့ဆင်းရဲနေတာလို့စာရေးသူကပြောတယ်။ သူပြောတာက Vicious Cycle လိုပဲ ...။ ဆင်းရဲတွင်းက ရုန်းမထွက်နိုင်လို့ ဆင်းရဲတယ်၊ ဆင်းရဲတွင်းက ရုန်းထွက်နေလို့ ပိုပြီးနောက်ကျတယ် ...။ ပိုပြီးနောက်ကျလို့ ပိုပြီးဆင်းရဲတယ် ...။အဲဒီတော့ ဆင်းရဲတွင်းထဲ ...ထောင်ချောက်လေးခုထဲ တစ်ခါထပ်ကျတယ်။ အဲဒါမျိုးကို Vicious Cycle လို့ခေါ်တယ်။ ကျွန်တော်ငယ်တုန်းက သင့်ဘ၀မဂ္ဂဇင်း တစ်အုပ်မှာအဲဒီ Vicious Cycle ကိုအမေရိကန်နဲ့ရုရှနဲ့ သရုပ်ဖော်ထားတာ ဖတ်ဖူးတာလေးကို လက်ဆင့်ကမ်းချင်ပါတယ်။ အမေရိကန်က လေတပ်အင်အားကို တိုးမြင့် ... ရုရှကို ခြိမ်းခြောက်သလို ဖြစ်တယ်လို့ရုရှက ယူဆ ... ရုရှက လက်နက်အင်အားတိုးမြှင့် .... အမေရိကန်က ရုရှရဲ့ခြိမ်းခြောက်မှုကို တန်ပြန်နိုင်ရန် လေတပ်အင်အားတိုးမြှင့် ...။ ... အဲဒါလေးကို မြားလေးတွေနဲ့ဆက်လိုက်ရင် Vicious Cycle လေးတစ်ခုရပါတယ်။ ဥပမာ ...လာဘ်စားမှုကို နှိမ်နင်းရန်အထူးအဖွဲ့ဖွဲ့စည်း... အထူးအဖွဲ့နှင့်ညှိနှိုင်းရန် အရာရှိများ ပိုလာဘ်စားလာ ... အဲဒါကလည်း အဆိုးသံသရာတစ်ခုပါပဲ။
Aid တွေပဲပေးလို့တော့ ဒီဆင်းရဲမှုပြဿနာတွေက မပြေလည်နိုင်ဘူး။
မပြောချင်တဲ့ဥပမာက နာဂစ်(စ်)။ အဲဒါကြောင့် နာဂစ်စ်ကို ကျော်ချပြီး မီးလောင်တာလောက်ကိုပဲပြောချင်တယ်။ကျွန်တော် မီးလောင်တဲ့သူတွေကို လှူတာတွေ့ဖူးတယ်။ ဘယ်လိုလှူသလဲဆိုတော့ တစ်ယောက်စီကို လိုအပ်မယ်ထင်တဲ့ စောင်တွေ၊ အ၀တ်အထည်နဲ့ဆေးဝါးတွေ၊ ရေပုံးလိုအသုံးအဆောင်တွေပေးတယ်ပေါ့ဗျာ။ ရှေ့မှာပေးပြီးရင် အဲဒီနောက်နားမှာ ပြန်ကောက်တဲ့သူတွေရှိတယ်ဗျာ။ ရလာသမျှကို ဈေးပါဖြတ်ထားပြီးသား။ ခွဲပြီးရောင်းရင် ဈေးတောင်နှိမ်သေးသလားတော့ကျွန်တော်မသိဘူး။ သေချာတာကတော့ သူတို့က ငွေလိုချင်တယ် ... အဲဒါကို ပစ္စည်းတွေ ထောက်ပံ့တဲ့အတွက် ပြန်ရောင်းရတယ်။ အမှားအမှန်တွေရွေးရတဲ့ စာမေးပွဲက ဓမ္မဓိဌာန်မေးခွန်းမဟုတ်တဲ့အတွက် ဒီကိစ္စတွေမှာ ဘယ်သူမှားတယ်မှန်တယ်လို့ ပြောလို့မရပါဘူး။ ဒါပေမယ့် သူတို့လိုနေတဲ့ငွေပဲ တန်းလှူလိုက်တာက ပိုပြီးစိတ်ချမ်းသာစရာ အလှူလေးဖြစ်မယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ထမင်းထုပ်ထဲ ငါးထောင်တန်ထည့်ပေးမယ်ဆိုရင်လည်း လမ်းမှာ ကြားက ဖွင့်မဖောက်တဲ့ ကောင်တွေ လက်ထဲထည့်ပေးဖို့ မိုးနတ်မင်းကြီးကိုပဲ အားကိုးရမလိုဖြစ်နေတယ်။ ... လိုနေတဲ့သူနဲ့ ပေးချင်သူကြားမှာ အချောင်လိုချင်တဲ့သူတွေဟာ ညီမျှခြင်းတစ်ခုကို ကြတ်ခြေခတ်လိုက်တဲ့ မျဉ်းတွေလိုပဲ ... အဲဒီလိုလူတွေ လူဖြစ်ရတာ အကုသိုလ်များလိုက်တာ။ နည်းနည်းပေးတာကို ကြားက နည်းနည်းလိုချင်ကြသလို .. များများပေးတာကို ကြားက များများလိုချင်ကြတယ်။ .... ဒုက္ခသည်တွေဟာ စီးပွားရေးလုပ်ပေါက်တွေလို့မြင်နေသရွေ့ ... ဒီကိစ္စဟာ နားလည်ဖို့ခက်ခဲတဲ့ကိစ္စဖြစ်နေဦးမှာပါ။
အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံအကြီးအကဲ ရွှေတွေဝတ်စားပြီး ဓာတ်ပုံတွေဘာတွေရိုက်ထားတာ ငယ်တုန်းက တစ်ခါတွေ့မိတယ် ...။ အီသီယိုးပီးယားဆင်းရဲတာလည်း မဆန်းဘူးလို့တွေးမိပါတယ်။ ဟန်ပြ အလုပ်တွေ များများလုပ်တဲ့နိုင်ငံဟာ ဆင်းရဲတယ်။
2005 July မှာ G8 Summit မှာ အာဖရိကကို အလှူ နှစ်ဆပေးမယ်လို့ဆုံးဖြတ်တယ်။
Summit ဆိုတာက တခါတခါလည်း တောင်ထိပ်၊ တခါတခါလည်း အစည်းအဝေး ... ဘာမှန်းမသည်းကွဲဘူး။ English တွေက စကားလုံးအရှားပါးဆုံးလူမျိုးတွေပဲ။ သူတို့စကားလုံးတွေထဲမှာ ပြင်သစ်နဲ့ လက်တင်ကို နှုတ်လိုက်ရင် Oh My God ဆိုတာပဲကျန်မယ်။ .... G8 ကတော့ ထိပ်သီးနေတဲ့နိုင်ငံတွေဆိုတော့ စတန့်ထွင်တာပေါ့ဗျာ။ တစ်ကျပ်ပေးလို့ သူတောင်းစားက ၀မလာရင် တစ်ကျပ်ကို ထမင်းစား၊ တစ်ကျပ်ကို အားဆေးဝယ်သောက်ဆိုပြီးတစ်နေ့နှစ်ကျပ်ပေးတာပေါ့။ အဲဒီလိုဆန်ဆန်ပေါ့။ သူတောင်းစားဆိုလို့ နှိမ့်ချသလိုဖြစ်သွားမယ်ဆိုတာတွေးမိပါတယ် ...။ သူဖုန်းစားလို့မရေးချင်လို့ပါ ...။ (ဖုန်း(ဖုံး)ထားတာစားရတာ တောင်းစားရတာထက်တောင်ပိုဆိုးနေတယ်လို့ခံစားရလို့ပါ။ ... လူတွေကလည်း သိတဲ့အတိုင်း အရေးကြီးတဲ့ အပိုင်းပဲ ဖုံးကာကြတာမဟုတ်လားဗျာ ...။) Aid တွေပေးတာများသလောက် မအောင်မြင်တာလည်းများပါတယ်။ အခု ၂၀၀၉ ရှိပြီပေါ့ ...။ သိကြတဲ့အတိုင်း အာဖရိကတော့ အာဖရိကပါပဲ ...။ မြောက်ကိုးရီးယားလို ပေးစာကမ်းစာနဲ့ အနုမြူဗုံးမလုပ်ပေမယ့် သူလည်း ဒုံရင်းကနေ သိပ်မထူးလာဘူး ...။ နှစ်ကျပ်ပေးတော့ပေးပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အခုန ဗိုက်မ၀တဲ့သူတောင်းစားက ငါးမူးဖိုးလောက်ပဲစားရသေးတယ် ...။ ကျန်တာတွေက ဘယ်ရောက်ကုန်သလဲမသိဘူးပေါ့ ....။တစ်ချို့ခေါင်းဆောင်တွေကလည်း နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်လုပ်နေပြီး နိုင်ငံနဲ့အတူ လိုက်ဆင်းရဲနေရတာ သိက္ခာကျတယ်၊ ဂုဏ်ငယ်တယ် .... နုံချာသေးနုပ်တယ်ပေါ့ ဗျာ .... ဖခင်သဖွယ်မဟုတ်ပါလားဗျာ ....။ အဖေကြီး ဆိုတော့လည်း အိမ်ပျက်ကြီးထဲမှာ ရွှေအိမ်သာခွက် လိုကောင်းလိုမယ်ပေါ့ဗျာ ...။ အဲဒီလိုပေါ့ ... ။ အာဖရိကပြောပါတယ်။ ဓာတ်ပုံထဲမှာပဲကြည့်ပါလား .. ကလေးတွေပြလိုက်ရင် ပိန်လိန်နေတာပဲ ...။ ခေါင်းဆောင်ကတော့ ဂမ်ဘာရီ ဆိုဒ်တွေနဲ့ ငနဲတွေ ...။
ဒါတွေကို ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေ တန်းခနဲသိတယ်နော် ...။ နိုင်ငံခြားကကောင်တွေ ညံ့တာပြောရဦးမယ်။ သူတို့ သူတောင်းစားကို နှစ်ကျပ်ပေးလို့ ၀မလာတာကို နားမလည်နိုင်ဘူး။ အဲဒီတော့ သူတို့လိုပဲ ဘွဲ့ကြီးကြီးရထားတဲ့ကောင်တွေ တိုင်ကီပုံးထဲ စုစိမ်ကြတယ်။ အဲဒါကို ဘိုလိုတော့ Think tank လို့ခေါ်တယ်။ အဲဒီလိုစုစိမ်လိုက်မှ ... တစ်ကျပ်ပေးတုန်း ကလည်း ဒီလောက်ပဲဝတယ် ....။ ဒီကောင်လွဲနေပြီဟ ... ဆိုပြီးသိကြတယ်။ အဲဒါကို Aid absorption ဘာညာဆိုပြီး နာမည်တပ်လိုက်ကြတယ်။ သူတို့မသိတာ အိမ်ပျက်ကြီးထဲက ရွှေအိမ်သာတွေအကြောင်းပဲ ....။ အာဖရိက မွဲတာလည်းမပြောနဲ့ ....။ လုပ်တာကမှ မဟုတ်တာကိုး။
နောက်ထပ်ရယ်စရာအလွဲတစ်ခုကို ပြောပြဦးမယ်။ စာအုပ်ဖတ်ရင်းနဲ့ရယ်မိတဲ့နေရာလေးပေါ့။ အလှူအဖွဲ့တွေခြင်း ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့လိုတာကိုပြောတာပါ။ အာဖရိကမှာ အလှူအဖွဲ့နှစ်ခုက မြို့တစ်မြို့ထဲမှာ ဆေးရုံကို အပြိုင်လုဆောက်တယ်တဲ့ ...။ အဲဒါကို ညှိနေတာ နှစ်နှစ်ကြာတယ် ...။ ... အဲဒါကိုက လူများရင် အလုပ်ပြီးမယ်ဆိုတဲ့ အယူအဆကို ချေဖျက်ပြီးသားဖြစ်စေတယ်။ လက်တွေများရင် အလုပ်ပေါ့မယ်ဆိုတဲ့စကားပုံက အဲဒီလက်တွေကို အလုပ်မ မယ့်လက်တွေလို့ အတင်းကာရောယူဆထားရာကြပါတယ်။ တကယ်တမ်းမှာက တစ်ချို့တွေက လှူတာတွေက လှူချင်တာထက် အလှူရှင်ဖြစ်ချင်တာ ပိုများနေတတ်တယ်။ .... အဲဒီလိုပေါတောတော အေဂျင်စီတွေကြောင့် နှစ်နှစ်အတွင်း ဆေးရုံတစ်ရုံ ရနိုင်ခွင့် ဆုံးရှုံးသွားတယ်။ Burma ဆိုတဲ့ တိုင်းပြည်လေးမှာတော့ အထူးသဖြင့် ဂျပန်က ငပုတွေက စစ်ဖြစ်ပြီး နှစ်တစ်ရာကျော်အထိ အကြွေးဆပ်နေပါသေးတယ်။ သာဓု ... သာဓု ... သာဓု ... လို့ သာဓုသုံးကြိမ်ခေါ်ရပါမယ်။ တရုတ်တွေလည်း ကူမင်တန်တွေ ကျူးကျော်ခဲ့တဲ့အတွက် တစ်နေ့နေ့မှာ လူသားချင်းစာနာတဲ့ အီကြာကွေးတစ်ချောင်းစီလောက်တော့ ပို့ပေးဦးမှာပါ ...။ နားလည်မှုအရ ကျွန်တော်တို့ဘက်က ဓာတ်ငွေ့လည်းဘာလေးတော့ လက်ဆောင်ပြန်ပေးမှ လူကြီးလူကောင်းဆန်တော့မှာပေါ့။
လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်သုံးဆယ်အတွင်းမှာ နိုက်ဂျီးယားနိုင်ငံဟာ ထောက်ပံ့ကြေး ဒေါ်လာ ၂၈၀ ဘီလီယံယူထားပါတယ်။ ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတစ်ခုရှိတာ စီးပွားရေးလုပ်လို့အကောင်းဆုံးပဲဆိုတာ အဲဒီဖြစ်ရပ်က သက်သေပြနေပါတယ်။ ... ဟဲဟဲ ...ဒီနေရာမှာလည်း ပါမောက္ခကြီးကပြောတာက သိပ်အများကြီးပေးတော့လည်း မထူးဘူးတဲ့။ သေချာတာတော့ အဲဒီမှာ ရွှေအိမ်သာအကြီးကြီးတွေရှိနေဦးမယ်ဆိုတာပါပဲ။
ဒီစာကိုဖတ်နေတဲ့သူတွေက အာဖရိကကနေ ထွက်ဖို့စိတ်မကူးထားပါနဲ့ ...။ ပြောနေသမျှက အာဖရိကက ကိစ္စတွေမို့လို့ ... အာဖရိကမှာပဲနေပါ ...။ အခုပြောမှာလည်း အာဖရိကနော် ..မယုံရင် စာမျက်နှာ ၁၀၃ မှာ ပြန်ရှာဖတ်ကြည့်နော်။ စာရင်းတွေအရ ရွှေအိမ်သာတင်မကဘူး ..လက်နက်တွေလည်းဝယ်သတဲ့ ...။ လှူတာက လက်နက်ဝယ်ဖို့တဲ့ ... အံ့ပါရဲ့တော်ဆိုပြီး NGO တွေ၊ IMF တွေက မိန်းမကောင်းရန်တွေ့ဖြစ်ကြရတယ်။ ဒါနဲ့ လွယ်တာတစ်ခုလုပ်လိုက်တယ်။ စစ်တပ်အင်အားကြီးတဲ့ နိုင်ငံတွေ နည်းနည်းပဲလှူကွာတဲ့ ....။ စာမျက်နှာ ၁၀၃မှာနော် ..။ သူတို့ပြောတာက ၄၀ ရာခိုင်နှုန်းကို လက်နက်ဝယ်တယ်တဲ့ ...။ အာဖရိက ... မွဲတာလည်း တာတေကိုလန်လို့ ...။ ဒီလက်နက်တွေရှိရုံနဲ့ အသားလည်းပြန်ဖြူလာမှာမဟုတ်တာကို ... လက်နက်တွေလျှောက်ဝယ်တယ်။ အဒီဘာယောတို့ ... မျက်လုံးစောင်းစောင်းနဲ့ ဒရော့ဘာတို့၊ ၀၀တုတ်တုတ်နဲ့တိုရေးတို့ ...။ အီးတီလိုလို အီတူးတို့ဆီက အခွန်တွေ လှိမ့်ကောက်တာကို ဒီမှာမရေးထားသေးဘူး။ .... ငါတို့တွေဟာ လူမိုက်အားပေးလုပ်နေပါလားလို့ သံဝေဂရသွားတဲ့ အလှူရှင်တစ်ချို့ဟာ ... ကြံကြံဖန်ဖန်တွေ လျှောက်တွေးပြီးလုပ်မိလုပ်ရာတစ်ခုကို လုပ်လိုက်ကြတယ်။
ငမွဲတွေက ပေးတော့လည်းဖြူန်းတယ်ကွာ .... ။ သူတို့ကိုမပေးတော့ဘူး ချေးမယ်။ Loan ပဲရမယ် ...။ Grant ကိုကြတော့ တကယ်ကို Developing ဖြစ်လာနေတဲ့ကောင်တွေကိုပဲပေးမယ်တဲ့ ...။ အဲဒါက သူတောင်းစားခွက်ပျောက်တဲ့အခန်းပေါ့ ...။ ဇာတ်ထဲမှာတော့ မင်းသမီးက လှိမ့်လှိမ့်ပြီးငိုတဲ့အခန်းမျိုးပေါ့။ ... ဘာတတ်နိုင်မှာလဲ ...။ အစမကောင်းတော့ အနှောင်းတွေ ထောက်ပံ့ကြေးမမှန်ဖြစ်ကုန်တယ်။ နူရာဝဲစွဲ လဲရာသူခိုးထောင်း .. မွဲပါတယ်ဆိုမှ ပိုက်ဆံချေးတဲ့သူနဲ့ပဲတွေ့တယ်။
။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။ ။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။ ။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။။
Peace B With U All ...
The Bottom Billion (အပိုင်း ၁)
မနေ့က Boxing Day အထိမ်းအမှတ်အဖြစ် သူငယ်ချင်း သုံးယောက် Orchard လမ်းမကြီးမှာ ချီတက်လမ်းလျှောက်ကြတယ်။ LV အိတ်တွေ ဈေးသိချင်လို့ဝင်မေးမိတယ်။ ၂၀၆၀ ဆိုလို့ ကိုယ်မျက်လုံးဘယ်လောက်အထိ ပြူးလို့ရမှန်းသိသွားတယ်။ မြန်မာပြည်က LV ဆယ်အိတ်လောက် ၀ယ်နိုင်တဲ့ မော်ဒယ်ကိုလည်း ၀ယ်နိုင်ပါပေတယ်လို့ အသိအမှတ်ပြုမိပါတယ်။
ဘာမှမ၀ယ်နိုင်တာတွေ ကြည့်မယ့်အစား ကိုယ်ဝယ်နိုင်တာတွေသွားကြည့်မယ်ဆိုပြီး Borders သွားတယ်။ စာအုပ်တွေအများကြီးထဲမှာ 35SGD ထက်နည်းတာလေးတွေ လိုက်ကြည့်တယ်။ ဂျူးထဲက ဆယ်တန်းကျောင်းသူလေးလို အသိအမြင်ဖွံ့ဖြိုးအောင် The Bottom Billion ဆိုတဲ့ Oxford (အောက်စ်ဖားဒ့်) က ပေါင်မုန့်ဖုတ်ကြီးရဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ဝယ်ဖြစ်ပါတယ်။ လွယ်လွယ်နဲ့ရလာတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ စာအုပ်သွားရှာတော့ Search မှာ ...။ Economics မှာ လက်ကျန် ၁၆ အုပ်ရှိသေးတယ်လို့တွေ့ပါတယ်။ ထုတ်တဲ့ခုနစ်က မနစ်ကထုတ်တာပါ။ အရောင်းစာရေးမလေးက ခပ်တည်တည်ပဲခေါ်သွားပါတယ်။ ခေါ်သွားတာက Economics ကောင်တာ မဟုတ်ဘဲ Business ဖြစ်နေပါတယ်။ ဒီထဲမှာရှိမယ်ဆိုပြီး စာအုပ် ၅၀၀ ကျော်ပါတဲ့စင်ကြီးကို ခပ်တည်တည်လက်ညှိုးထိုးပြီး ပြန်သွားပါတယ်။ ရှာကြည့်ပါတယ်။ သုံးယောက်စလုံးရှာကြည့်ရင်း မဖြစ်နိုင်မှန်းသဘောပေါက်သွားလို့ စာအုပ်ရှာပေးတဲ့ ကောင်တာမှာ သွားတန်းစီပါတယ်။ အဲဒီကကောင်လေးက သေချာပေါက်သိသလိုနဲ့ စင်အောက်မှာ ကုန်းကုန်းကွကွရှာပါတယ်။ အမှန်က စာအုပ်က စင်ရဲ့ညာဘက် အလယ်တန်းနားမှာပါ။ အင်မတန်မျက်လုံးကောင်းတဲ့ သူငယ်ချင်းက သူ့မျက်လုံးနဲ့ တတန်းထဲလောက်ရှိနေတဲ့စာအုပ်ကို သေချာပေါက်တွေ့သွားပါတယ်။ စာအုပ်ရှာနေတဲ့ကောင်လေးကတော့ ရှာလို့ကောင်းတုန်းပဲ ...ပါးစပ်ကလည်း စာအုပ်ပဲကုန်သွားသလားဘာညာ ပြောနေပါသေးတယ်။ သူရှာနေတာ တွေ့မှလာပေးလို့ပြောပြီး ကိုယ့်ဘာသာကိုယ် အတည်ပေါက်နဲ့လစ်သွားဖို့ကောင်းပေမယ့် အသက်အရွယ်အရ ရှာတွေ့ပြီလို့ပဲ လူကြီးလူကောင်းဆန်ဆန်ပြောရပါတယ်။
ရထားပေါ်မှာ ထိုင်ခုံရတုန်း စာဖတ်ရင်းလိုက်လာပါတယ်။
ဂျူးစာအုပ်ထဲက ကလေးမလေးကို အားကျပါတယ်။ ငါဆယ်တန်းတုန်းက Preface ကို ရှေ့မျက်နှာလို့ထင်တာ သူကတော့နားလည်ရှာသားလို့တွေးမိပါတယ်။ Preface ပြီးတော့ ပိုတောင်လေးစားသွားသေးတယ်။
ဟဲဟဲ ... ဒါက ပေါက်ကရလျှောက်ပြောတာပါဗျာ ....။
အရင်ကတော့ စာရေးတာ လူတွေစိတ်ချမ်းသာဖို့ရေးတာပါ။ ဖတ်ရတဲ့သူက စိတ်ချမ်းသာသွားရင် တန်တာပေါ့ ...။ စိတ်ဆင်းရဲပြီးပြန်သွားရရင် မတန်ဘူးလို့တွေးပါတယ်။ ကိုယ်တိုင်လည်း စိတ်ချမ်းသာတာလေးတွေပဲ ရွေးပြီးဖတ်ဖြစ်ပါတယ်။ ... အခုတော့ အသက်နည်းနည်းကြီးလာတဲ့အတွက် စာရေးတာလူကြီးတွေအတွက်ရေးတာထက် ကလေးတွေအတွက်ပိုပြီးရေးချင်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အသက် ၁၇ ကနေ ၂၂ နှစ်လောက် ကလေးတွေအတွက်ပါ ....။ ကျွန်တော်ထင်တာတစ်ခုက သူတို့တွေဟာနောက်အနှစ်နှစ်ဆယ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် အရေးအကြီးဆုံးဖြစ်လာမယ့်သူတွေပဲ။ ကျွန်တော်တို့လို မြန်မာပြည်အပြင်မှာ ကိုယ့်အလုပ်ကိုယ်လုပ် ... နိုင်ငံက ဆင်းရဲတာ ချမ်းသာတာတွေလည်း သိပ်စိတ်မ၀င်စား။ နိုင်ငံအတွက် တစ်ခုခုပေးဆပ်ဖို့ဘာညာ အဲဒီလိုလည်း စိတ်ကူးမရှိတဲ့သူတွေ အတွက်တော့ ဒီကိစ္စဟာ ကလေးတွေကို လက်ဆင့်ကမ်းလိုက်တာ အကောင်းဆုံးဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ သူတို့ နားမလည်လို့ မဖတ်ချင်တဲ့စာတွေကို တတ်နိုင်သမျှ ဘာသာပြန် သူတို့ဖတ်ဖြစ်ဖို့ကြိုးစား ... သူတို့ကိုမြှောက်ပေး ...အဲဒီလို လုပ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်။ ဥပမာ အသက် ၁၇ နဲ့ ၂၂ ကြားကလေးတွေထဲမှာ The Gardener Blog ဖတ်ရင် ကံစမ်းမဲပေးတာတို့ဘာတို့လည်း လုပ်ဖို့စဉ်းစားထားပါတယ်။ NGO မှာလုပ်နေတဲ့လူငယ်လေးတွေကိုလည်းလေးစားပါတယ်။ အသက်ငယ်ပေမယ့် ကိုယ့်လို ခေါင်းမရှောင်တတ်တဲ့ လူငယ်တိုင်းကိုလေးစားပါတယ်။ လူကြီးတွေဆိုတာ သေဖို့ ယုတ္တိကျကျ ပိုပြီး probability များပါတယ်။ လူကြီးတွေအားကိုးနေရင်တော့ အလကားပါပဲ ...။ လူငယ်တွေကတော့ potential များပါတယ်။ သူတို့ဘာသာသူတို့ Punk တွေ၊ Hip_Hop တွေဖြစ်နေပေမယ့် ... သူတို့တွေရဲ့ စိတ်မှာ potential အများကြီးရှိပါတယ်။ အသက်ကြီးသွားတဲ့သူတွေပီပီ ... ကိုယ့်ရဲ့ အသိအမြင်နည်းမှုကိုလည်း မရှက်မကြောက်ဝန်ခံပါတယ်။ ကလေးတွေပဲ အားကိုးရတော့မှာလို့ ခပ်တည်တည်ကြီးပြောလိုက်ပါတယ်။ ကလေးတွေဖတ်ဖို့ရေးထားတာဖြစ်လို့ အဆင်ပြေတဲ့အခါ ကလေးတွေကို ဖတ်ဖို့တိုက်တွန်းစေချင်ပါတယ်။
ကဲပျင်းစရာကြီးတွေကို စလိုက်ရအောင် ...။
စာအုပ်တစ်အုပ်ရဲ့အမှာစာအကြောင်းနဲ့ တခြား ပေါက်ကရလေးတွေပြောမလို့ပါ ...။ အမှာစာ
ရေးတဲ့သူက အောက်စ်ဖားဒ်(Oxford) က ပါမောက္ခပါ ...။ ဒါပေမယ့် စေတနာကောင်းတော့ စာကိုလွယ်လွယ်ပဲရေးပါတယ်။ ကလကတ္တားကပါမောက္ခသာဆိုရင် ဒီလိုရေးချင်မှရေးမယ်ထင်တယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကို အက်ဆေးတွေထဲမှာ အားရပါးရ ရေးမိတဲ့ နာမ၀ိသေသနတစ်ခုကို မှတ်မိမလားမသိဘူး ...။
ဘယ်လိုရေးကြသလဲ ....။ ကျွန်တော်ကတော့ ခပ်တည်တည်ကြီး our country isadeveloping country ... လို့ရေးခဲ့ပါတယ်။ .... တကယ်တမ်းသာ အဲဒီ စကားလုံးဟာမှန်ရင် ဆယ်တန်းဖြေပြီးတဲ့ ၉၉ ကနေ အခု ၂၀၀၉ ကုန်ခါနီး ဆယ်နှစ်ကျော်အတွင်း developed ဆိုပြီးတိန်တိန်မြည်နေဖို့ကောင်းပြီလေ။ ဆယ်နှစ် ...။ အဲဒီဆယ်နှစ်မတိုင်ခင်တုန်းက essays တွေမှာလည်း အဲဒီလိုပဲ ရေးခဲ့ကြသေးတာမဟုတ်လား။ ဆိုလိုတာက ဒီစကားလုံးကို ပြန်စဉ်းစားဖို့လိုပြီဆိုတဲ့အဓိပ္ပါယ်ပေါ့ ...။ ဥပမာ ဘိန်းဖြတ်ခါနီးဘိန်းစား ဆိုတဲ့စကားလုံးကို နောက်ဆယ်နှစ်မှာ အဲဒီလူပေါ့ လွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်နှစ်ကတည်းက ဘိန်းဖြတ်ခါနီးဘိန်းစားဖြစ်ခဲ့တာ အခုအထိပါပဲ ဆိုရင် ..... တခုခုတော့လွဲနေပြီမဟုတ်လား။ ဘိန်းမပြတ်သေးဘူးလား။ သူ့အစီအစဉ်မအောင်မြင်တာတော့ အတိအကျပဲ မဟုတ်လား ....။ လူငယ်တွေကိုပြောချင်ပါတယ်။ developing ဆိုတဲ့စကားလုံးလေးကိုပြင်ပေးဖို့ လူကြီးတွေက အားကိုးနေတာ လူငယ်တွေကိုပါပဲ ...။ ကျွန်တော်တို့ မပြင်နိုင်ခဲ့တဲ့ စာလုံးလေးကို ပြင်ပေးနိုင်မလားလို့ အကူအညီတောင်းတဲ့သဘောပါ။
မာလ၀ီနိုင်ငံနဲ့ပဲပြောရအောင်။ ကျွန်တော်ကလည်းမြန်မာပြည်ပြန်ဦးမှာဆိုတော့ မာလ၀ီပဲထားလိုက်ပါ။
သေချာထပ်ပြောတယ်နော်။ မာလ၀ီ ...။ အာဖရိကက နိုင်ငံလေး။ သိပ်ဆင်းရဲတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃၅ နှစ်ကလည်း ဆင်းရဲတယ်။ အခုလည်းဆင်းရဲတယ်။ နောင်လည်း ... ဟဲဟဲ ... အဲဒီလိုပြောရတာ အားနာပါတယ်။ သူတို့ဘာလို့ဆင်းရဲတာလည်းဆိုတော့ development path ကို မလျှောက်လှမ်းလို့တဲ့ ...။ ဥပမာ ဆိုပါတော့ မြေပုံကြီးရှိပြီး မသွားရင် အချက် ခြောက်ချက် ခုနစ်ချက်ပါပါ ... မရောက်နိုင်ဘူး။ မာလ၀ီနိုင်ငံပြောပါတယ်။ တချိန်က ဆင်းရဲသား အိန္ဒိယ နဲ့ ဆင်းရဲသား တစ်ယောက်ပြည်သူ့သမ္မတ နိုင်ငံတွေထက် ချမ်းသာခဲ့တဲ့ မာလ၀ီ ... (တစ်ယောက်ပြည်သူ့သမ္မတဆိုတာ မှားရေးတာမဟုတ်ပါဘူး ...အမြဲတမ်း one china policy လို့အော်နေလို့ တရုတ်ပြည်သှူုသမ္မတနိုင်ငံမဟုတ်တော့ဘဲ တစ်ယောက်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံလို့ပြောင်းပေးထားတာပါ။) ... အဲဒီမာလ၀ီဟာ အခုတော့ ခေါင်မှာစွဲအောင်မွဲတယ်တဲ့ ...ရေသည်ယောကျာ်းလို ဖွားဘက်တော် တခြမ်းပေါ်နေတဲ့လူတွေများတယ်လို့ အကြမ်းဖျင်းမှတ်ထားလို့ရပါတယ်။ ဆင်းရဲတာကတော့ ရယ်စရာမကောင်းတာအမှန်ပဲ ...။
တွေးကြည့်ရင် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ရှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်းက ချမ်းသာကြပြီး နှစ်ဆယ်ရာခိုင်နှုန်း ကဆင်းရဲကြတဲ့အတွက် ..ဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေကသာ ရှားပါးပစ္စည်းလို တန်ဖိုးကြီးနေတယ်လို့ ကြံဖန်ဂုဏ်ယူချင်စရာကောင်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တလွဲဆံပင်ကောင်းတာလည်း မကောင်းလှပါဘူး။ ဆင်းရဲနေတဲ့ လူနှစ်ဆယ်ကို လူရှစ်ဆယ်ကမထောက်ပံ့နိုင်ဘူးဆိုတာလိုဖြစ်နေပါတယ်။ ... ထင်သလောက်မလွယ်ဘူးလို့ မူရင်းစာရေးသူကပြောပါတယ်။ သူရေးပြတဲ့ ဆင်းရဲမွဲတေနေတဲ့ နိုင်ငံကြီးထဲမှာ စာလုံးပေါင်းများမှားသလားမသိဘူး ... Burma ဆိုပြီး ပါပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးထင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့က Myanmar တွေပါ။ Myanmar နိုင်ငံမှာနေပါတယ်။ သူတို့ပြောတဲ့ Burma ကတော့ ဆင်းရဲပါသတဲ့ ...။ အလားတူပြဿနာမျိုးရှိတဲ့ပုံပဲလို့ ယူဆပါတယ်။
ကိုယ်ပေါင်ကိုယ်လှန်ထောင်းရတာ အားနာစရာနော် ...။
စာရေးတဲ့သူက အင်္ဂလန်က သားသတ်သမားသားဆိုတော့ ရွှေပြည်ကြီးကို စော်ကားမိတာလည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်မျိုးသေသင့်ပါတယ်လို့မပြောရင်သူ့ကို ကြိမ်ဒဏ်ငါးဆယ်ပေးသင့်တယ်။ ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ ... တစ်သက်လုံးဘေးပြောတာကိုမယုံ ..သွေးပြောတာကို ယုံလာတဲ့ နိုင်ငံသားကောင်းတစ်ယောက်ပီပီ ဒီလို အငြင်းပွားဖွယ်ရာစာတွေကို ဖတ်မိတဲ့အခါ shock ရပါတယ်။ ဟိုတလောကပဲ မြန်မာနိုင်ငံဟာ အာရှရဲ့ စီးပွားရေးအဖွံ့ဖြိုးဆုံး ဖြစ်လာနိုင်တဲ့ ဇုန်ထဲမှာ ခပ်တည်တည်ကြီးပါနေတယ်ဆိုတာကို Weekly Eleven မှာဖတ်ထားတာဆိုတော့ တစ်ခုတော့တွေးမိတယ် ...။ Oxford မကလို့ ဘယ်ကပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ ... စာရေးခါနီး သတင်းစာမဖတ်ရင်တောင် Weekly Eleven တော့ ဖတ်သင့်တာပေါ့။ လောလောဆယ် မီးမမှန်သေးတာကို သိပ်ပြီးပြောစရာမရှိပါဘူး။ ဒါကိုက ဒီဇယ် ၀ယ်သုံးနိုင်လောက်အောင် နိုင်ငံက ကြွယ်ဝနေတယ်လို့ ကျွန်တော်လို လူပြိန်းကအစသိနေတာပဲမဟုတ်လား။ တစ်ချို့နိုင်ငံခြားသားတွေသိပ်ခက်တယ်။ London မှာရှိတဲ့ အိမ်ခြေမဲ့ပြဿနာကိုအရင်မရှင်းဘဲ ... ရွှေပြည်ကြီးကို ဆင်းရဲပါတယ်လုပ်နေတာ ဝေသာလီပုဏ္ဏားဆန်တာပေါ့ ...။ ပလာတာ ဒယ်အိုးလောက်မှ ဇောက်မနက်တဲ့ အကြံကြီးက လယ်ပြင်မှာ ဆင်သွားသလို ထင်ရှားနေတယ်လို့ ယုံကြည်လိုက်ချင်ပါတယ်။
ဒီ ပါမောက္ခပြောတာကတော့ Developing countries အချို့တွေဟာ not just falling behind, they are falling apart. ... အဲဒါကိုဖတ်လိုက်မိတော့ စိတ်မကောင်းသလိုလို ...မျက်ရည်တွေပဲဝေ့ရမလိုလို ... အံကြိတ်ပြီး လက်သီးဆုပ်ရမလို ... မျက်တောင်ပုတ်ခတ်ပုတ်ခတ်လေးလုပ်ပြီး မျက်ရည်တွေပြန်သိမ်းရမလိုလို ... ၀မ်းနှုတ်ဆေးနဲ့ဝမ်းပိတ်ဆေး တွဲသောက်မိသလို မအီမသာ ....ဖြစ်မိတယ်။ ဆုပ်လည်းစူး၊ စားလည်းရူး ပြီး ကိုင်ထားလည်းယား တဲ့ အသီးတစ်ခုခုကို မကိုင်မနေရ ကိုင်ထားရသလိုဖြစ်မိတယ်။ ဘာသာပြန်စရာမလိုလောက်ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ မြန်မာပြည်က ဆယ်တန်းကျောင်းသူလေးတောင် အခုပြောတဲ့စာအုပ်ကြီးဖတ်ပြီးသွားပြီပဲလေ။(ဂျူးစာအုပ်ထဲမှာ ဖတ်လိုက်တာ)။ .... တို့ကတော့ တို့ကတော့ ဆိုတဲ့သီချင်းထဲမှာ ...ဝေးဝေးကနေ ဆုတောင်းပေးမယ် ဆိုတာကိုက ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်သုံးစကားပဲ...။ ဝေးဝေးကနေ မေတ္တာပို့နိုင်တယ်။ မျက်နှာမြင်ရင်သာ ဆဲမိဆိုမိဖြစ်ကုန်တာ။
ဆင်းရဲတာ သန်းတစ်ထောင်ပဲရှိတာ ကျန်တဲ့နိုင်ငံသားတွေက ချမ်းသာကုန်ပြီ။ အနည်းဆုံးရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ လိုအပ်ချက်တွေ ပြည့်စုံကုန်ပြီဆိုတော့ ကြားရတာ စိတ်မချမ်းသာလိုက်တာ။ တစ်ရွာလုံးချမ်းသာတော့ တစ်ယောက်တည်းသော သူတောင်းစား ကြီးပွားတာပေါ့ ဆိုတဲ့ အယူအဆကို အရင်ကလည်းမကြိုက်သလို အခုလည်းမကြိုက်ပါဘူး။ ကိုယ့်တိုင်းပြည်ကြီးကလည်း ကံအကျိုးပေးမကောင်းလို့ဆင်းရဲတာဆိုလည်းထားတော့ ...။ ဘုရားသခင်နဲ့မတဲ့လို့ ဒဏ်ရိုက်ထားတာဆိုလည်း အပြစ်မပြောပါဘူး။ ရှိုက်တန်တွေပဲရှိလို့ အလ္လာအရှင်မြတ်က မျက်နှာလွှဲတယ်ဆိုရင်လည်း လက်ခံပေးလိုက်လို့ရပါသေးတယ်။ အခုတော့ ဒီလိုလည်းမဟုတ်ဘူး။ ရှိသင့်ရှိထိုက်တဲ့ ရုပ်ရည်ရူပကာရှိပြီး ..(အချိုးအစားပြေပြစ်ပြီး) ယောကျာ်းမရနိုင်တဲ့ အပျိုကြီးလိုပဲ ကျွန်တော်တို့ နိုင်ငံကြီးဟာ တစ်ခုခု မှားနေတယ်။
ကျွန်တော်တို့ပညာရေးစနစ် ... (၀ါ) တက်သုတ်ရိုက် ခါတော်မီ ဘွဲ့ရ (၀ါ)
စိတ်ဓာတ် စည်းကမ်း ပညာ ကျန်တာ အာပ္ပလာ (၀ါ)
ကျောင်းတွင်ပျော်၍ ... ဘွဲ့တွင်ရစေရမည် ... (၀ါ)
မိဘဆရာပူးပေါင်း ကလေးကျူရှင်ပို့ (၀ါ) ... အဲဒီစနစ်ကလည်း ပြောပလောက်အောင်ဆိုးတာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ဆိုရင် သံလျင်မှာ ငါးနှစ်တိတိ ပညာရည်နို့သောက်စို့လာတာပါ။ ပညာရည်နို့မှာ ဗီတာမင် အစုံအစေ့ပါလားမပါလားတော့ မသိဘူးပေါ့ဗျာ ...။ ဒါပေမယ့် ဒါက ကျွန်တော့်အတွက်တော့ Acceptable ဖြစ်ပါတယ်။ ရသင့်သလောက်တော့ရပါတယ်။ လက်တွေ့နည်းတာကလွဲရင် သီအိုရီပိုင်ပါတယ်။ ဆရာတွေကလည်း သူ့ဘာသာသူ သေချာသင်ကြပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့မေဂျာက အိုင်တီပါ။ ဘယ်ပညာယှိက တလွဲ ဘာသာပြန်လိုက်မှန်းမသိလို့ သုတနည်းပညာဆိုပြီး ပေါတောတော ဘာသာပြန်ခံလိုက်ရတာကလွဲရင် တခြားဟာတွေမဆိုးပါဘူး။ အရှေ့တောင်အာရှရဲ့ အစုတ်ပဲ့ဆုံးသော သင်ကြားမှုစနစ်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျွန်တော်ရုံးမှာ စလုံးတွေ၊ NUS ကကျောင်ြး့ပီးတဲ့သူတွေကိုလည်းလေ့လာပါတယ်။ သူတို့နဲ့ကျွန်တော်တို့ ကွာတာ တစ်ခုပဲရှိပါတယ်။ သူတို့က ကျောင်းမှာသင်ထားတာတွေကို လုပ်ဖူးခဲ့ပြီး ကျွန်တော်တို့က ကျောင်းမှာသင်ထားသမျှကို စာမေးပွဲမှာဖြေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒါကလွဲရင် သူမသာ ကိုယ်အသုဘပါပဲ။ Top Student တွေကတော့ ကိုယ့်ထက်အများကြီးပိုသာကောင်းသာမယ်ပေါ့ဗျာ ...။ ဒါပေမယ့် သာမန် ကျောင်းပြီးပြီးသားလူတွေချင်းယှဉ်ရင် သိပ်မညံ့ပါဘူး။ သိပ်မကွာဘူး။ ဆိုလိုတာကတော့ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပညာရေးစနစ်ဟာ သုံးစားမရတာမဟုတ်ပါဘူး။ Stable မဖြစ်ခင် ဟိုပြောင်းဒီပြောင်းလုပ်တာကိုလျှော့ပြီး လက်တွေ့များများလုပ်ခွင့်ရရင် အတော်လေးကို အဆင့်အတန်းရှိလာမှာပါ။ သေချာတာကတော့ မြန်မာနိုင်ငံဟာ ပညာရေးစနစ် သုညကနေပြန်စရမယ့် အဆင့်တော့မဟုတ်ပါဘူး။ ကျောင်းတွေတောထဲမပို့ရင်တော့ သွားရလာရပိုလွယ်ပြီး စာလုပ်ဖို့အချိန်ပိုရတာပေါ့ဗျာ။ စာကျက်ချင်တဲ့သူကတော့ ကျောင်းကားပေါ်မှာလည်းကျက်လို့ရပါတယ်။ မကျက်ချင်တဲ့ ခပ်ဖျင်းဖျင်းကျောင်းသားတွေကတော့ ပညာရေးစနစ်ကြောင့် ငါတို့ညံ့တာပါလို့ တစ်သက်လုံးပြောနေမှာပါပဲ ...။ အဲဒီလို ပေါတောတောကျောင်းသားမျိုးတွေကိုတော့ အချောင်ခိုတဲ့ကျောင်းသားအဖြစ်သတ်မှတ်ရပါမယ်။ မြန်မာပြည်မှာ လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် လုံလုံလောက်လောက်ရှိတယ်လို့ ဘယ်သူ့ကိုမဆိုပြောနိုင်ပါတယ်။ မြန်မာတွေဟာ အထည်ချုပ်အလုပ်သမားတွေလောက်ပဲထွက်တဲ့နိုင်ငံမဟုတ်ဘူးဆိုတာကို ထောက်ပံ့ကူညီတဲ့နိုင်ငံတိုင်းသိဖို့ ကြိုးစားဖို့လိုပါမယ်။
စာရေးသူကပြောတာက ဒီိလိုပါ ...။ အဲဒီလို ပတ်ဝန်းကျင်မျိုးမှာ(နိုင်ငံရေး၊စီးပွားရေး၊လူမှုရေးတွေကိုပေါင်ြး့ပီး ပတ်ဝန်းကျင်လို့ပြောထားတာပါ) ဒီလိုနိုင်ငံတွေမှာ ထောက်ပံ့ကူညီရေးဟာ သိပ်မထိရောက်ဘူး။ ဒီနိုင်ငံတွေမှာရှိတဲ့ အေဂျင်စီတွေ ...(ဒီနေရာမှာတော့ စွမ်းအားရင်းမြစ်တွေကို control လုပ်နိုင်တဲ့သူတွေကိုပြောတာပါ ...) ဟာ အသိပညာဗဟုသုတ မရှိလို့ ... ဒါမှမဟုတ် ... အဲဒီအခြေခံလူတန်းစားတွေရဲ့ပြဿနာကို စိတ်မ၀င်စားလို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ (အဲဒီဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာက ကျွန်တော်ပြင်ပေးထားတာပါ။ တကယ်ရေးထားတာကတော့ ဖြစ်တယ်လို့ ဘာသာပြန်ရမယ့်အသုံးမျိုးပါပဲ ...။ ဒါပေမယ့် ဇာတိပုည ဂုဏ်မာနအရ ဘာသာပြန်ရင် ကိုယ့်နိုင်ငံမကောင်းတာမရေးချင်ဘူး။) အဲဒီ အေဂျင်စီတွေဟာ ထူးထွေများပြားတဲ့မူဝါဒတွေနဲ့ ဘယ်လို စုရုံးလုပ်ကိုင်မယ်ဆိုတာကို နားလည်အောင်လေ့လာဖို့လိုပါမယ်လို့စာရေးသူကပြောပါတယ်။ တခါတလေ စဉ်းစားကြည့်တယ်။ လမ်းကူးတာကို တီဗွီမှာ ပညာပေးတာပါ။ ဘယ်ကြည့်၊ ညာကြည့် ... အဲဒီအထိတော့ ဟုတ်ပါတယ် ..ကြည့်ရမှာပေါ့ ...။ မကျေနပ်တာက ဘယ်ပြန်ကြည့်ညာပြန်ကြည့်ဆိုတာပါ။ အဲဒါဆို ခေါင်းကအတော်လေးမူးသွားနိုင်ပါတယ်။ တကယ်လုပ်ကြည့်ပါ။ ဘယ်ကြည့်ညာကြည့်ဘယ်ညာကြည့်ဘယ်ပြန်ကြည့်ညာပြန်ကြည့် လမ်းရှင်းမှကူး ဆိုတော့ ...ဘယ်ညာလှည့်နေတာနဲ့ ခေါင်းမူးတဲ့သူဆိုမူးလဲသွားနိုင်ပါတယ်။ မူဝါဒမှာလည်းဒီလိုပါပဲ။ မလိုတဲ့အပိုတွေ လုပ်တာများရင်ဘာလုပ်ရမှန်းမသိတော့ပါဘူး။ အရင်က ဝေသာလီပုဏ္ဏားထဲမှာ BBC နဲ့ VOA စပါတယ်။ မကြာဘူး RFA ကိုထည့်ပါတယ်။ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ အဲဒါက ပြဿနာပါ။ ပထမမှတ်ထားလိုက်တာက BBC နဲ့ VOA ဟာ မမှန်ဘူး။ အခု RFA လည်းမမှန်ဘူး။ တချိန်မှာ သတင်းစာဟာ မမှန်ဘူးလို့ ပါလာဦးမလားဆိုတာကို တွေးမိပြီး ကျွန်တော် ဘာကိုယုံရမှန်းမသိတော့ဘူး။ အဲဒီကတည်းက သတင်းစာမဖတ်ဖြစ်တော့ဘူး။ ဒါက အသေးအဖွဲတွေပါ ...။ အခုဆိုရင် ဆန်တွေကို အာဖရိကကိုရောင်းတယ်။ မူဝါဒက အသားမည်းတဲ့သူတွေကို ဆန်ရောင်းမယ်ဆိုပါတော့ ...။ တစ်ချိန်မှာ တရုတ်ကို ဆန်များပို့လိုက်လို့ကတော့ ကျွန်တော့်အတွက်တော့ဒုက္ခ ...။ အသားမည်းတဲ့ ပေါင်ချိန်လို တရုတ်တွေအတွက် တင်ပို့တာလို့ ခါတော်မီ ယုတ္တိဗေဒတစ်ခုကို တပ်ဆင်ရဦးမှာပဲ။
ကျွန်တော်က ဖြစ်နိုင်ရင် မြန်မာနိုင်ငံကို ဆင်းရဲမွဲတေ အသုံးမကျပြောတဲ့ ပညာတတ်တိုင်းကို ဆွေးနွေးငြင်းခုံလိုတဲ့သတ္တ၀ါအမျိုးအစားထဲမှာ ပါပါတယ်။ မင်းတို့ထင်သလောက်တော့ မဆင်းရဲပါဘူးကွာ .. LV ဆယ်အိတ်ဝယ်ထားတဲ့မော်ဒယ်ရှိပါတယ်ကွ .. အစရှိသဖြင့် .. ပေါက်ကရတွေပြောပြီး နိုင်ငံဘက်က ကာကွယ်တတ်တဲ့ မျိုးချစ်တွေထဲက တစ်ယောက်ပါ။ ဒါပေမယ့် ပညာပိုတတ်လာတဲ့သူတွေကတော့ စကားပြောရင် စာရင်းဇယားပါလာတော့ ငြင်းရပိုခက်လာပါတယ်။ အခုပါမောက္ခကလည်း အာဖရိကမှာ အကြာကြီးအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့သူပါ။ သူပြောတာကတော့ အဲဒီလို developing လို့ အားနာပါးနာ ခေါ်နေရတဲ့ အမှန်ခေါ်သင့်တာက (failed in developing, so-called developing ) နိုင်ငံတွေမှာ ဘာလို့ သူတို့က developing ဖြစ်လာနေတဲ့နိုင်ငံတွေနဲ့မတူတာလည်းဆိုတဲ့အချက်က လက်သည်ရှာမတွေ့ဘူးဖြစ်နေတယ်တဲ့။ ... ဒါကိုဖတ်မိတော့ ဒီပါမောက္ခကလည်း မြန်မာ ဘလော့ခ်လေးဘာလေးဖတ်မှပေါ့လို့တွေးမိတယ်။ အဲဒါဆို သူ လက်သည်ရော၊ ၀မ်ဆွဲပါ ရှာတွေ့သွားပြီး၊ ကံကောင်းရင် OG ကြီးရဲ့နာမည်လေးပါ သူသိခွင့်ရတော်မူနိုင်သေးတယ်လေ။ အခုတော့ သူမသိပါဘူးတဲ့။ မသိတော့လည်း မေတ္တာပို့ပေးရမယ့် လူစာရင်းနည်းတာပေါ့လို့ မဟားတရားအကောင်းမြင်လိုက်မိပါသေးတယ်။
တခါတလေ ရှဉ့်လည်းလျှောက်သာ ပျားလည်းစွဲသာ ဆိုတဲ့စကားပုံကို သေချာတွေးကြည့်တယ်။
ရှဉ့်ကရော ပျားတွေကို နားလည်ပေးမှာလား။
ပျားကရော ရှဉ့်ကို လျှောက်ခွင့်ပေးပါ့မလား။
စကတည်းက ရှဉ့်မရှိမှ အဆင်ပြေမယ်။
ပျားတွေကို ... စသဖြင့် တွေနဲ့ နှိပ်ကွပ်ထားမှ တန်ရာကြမယ်။ ဒီပျားတွေက ဝေးဝေးရောက်ရင် တ၀ီဝီပိုအော်တယ်။ နီးနေတုန်း ဆွဲစိမှ ...။ အဲဒီလို မတွေးဘဲ ... ရှဉ့်အတွက်ရော ပျားအတွက်ပါ အဆင်ပြေလောက်တဲ့ Common Ground ကနေစသင့်တယ်လို့ပဲထင်တယ်။ Common Ground မရှိဘူး ချကွဆိုတဲ့ အယူအဆနဲ့ အဟိံသ အစွန်းရောက်လမ်းစဉ်တွေအလုပ်မဖြစ်ခဲ့တာ အနှစ်နှစ်ဆယ်ရှိပါပြီ။ အလုပ်ဖြစ်တာပဲပြောကြရအောင်။ ကင်ဆာရောဂါမှာ မပျောက်ပေမယ့် ဆက်မကြီးထွားအောင်ထိန်းထားလိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးရှိတယ်။ တစ်ချို့ကိစ္စတွေက ထိန်းထားတာကနေစသင့်တယ်။ လက်ညှိုးထိုးပွဲတွေဟာ အဖြေမထွက်ဘဲ ရန်ပွဲနဲ့ပဲအဆုံးသတ်လိမ့်မယ်။ စင်ကာပူရဲ့ ရွှေရည်စိမ် ဒီမိုကရေစီကိုကြည့်ပါ။ စင်ကာပူလူမျိုးတွေ ... အစိုးရကို ကြိုက်လား ... မကြိုက်ကြတာများပါတယ်။ Minister Mentor ကို လခ သန်းနဲ့ချီပေးရတာ မကြိုက်ပါဘူး ...။ စီးပွားရေးအဆင်ပြေအောင် လုပ်ပေးနိုင်တော့ အဲဒါကို ဘယ်သူမှ အရေးမစိုက်တော့ပါဘူး။ သူတို့ ခေါင်းအတွက် နည်းနည်းပေးစားလိုက်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးလက်ခံလိုက်ကြပါတယ်။ ခေါင်းရှိတဲ့သူတွေအတွက် ခေါင်းက နည်းနည်းရောင်းစားလို့ရတယ်။ ခေါင်းမရှိတဲ့သူကြတော့ ဘာရောင်းမလဲ ...။ ဒီမေးခွန်းက တော်တော်စိန်ခေါ်တဲ့မေးခွန်းပါ ...။ ခေါင်းရှိတဲ့သူတွေကို မြှောက်ပေးလိုက်ရင် ခေါင်းရှိတဲ့သူတွေက အများကြီး လုပ်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။ မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံး သူငယ်တန်းဆရာမက အစ phD ဖြစ်လာတဲ့အခါ phD ဆိုတာ သူငယ်တန်းစာသင်တဲ့ ဆရာလို့ အယူလွဲသွားနိုင်တဲ့ မလိုအပ်ဘဲ mass production လုပ်နေတာကို ခေါင်းရှိတဲ့သူတွေမလုပ်ပါဘူး။ ကျွန်တော့်ဘကြီးရဲ့ရှေ့သွားတွေ ကျိုးသွားရတာ မာကျောတဲ့အရာဝတ္ထုကိုကိုက်မိသောကြောင့်ဖြစ်ကြောင်း သက်သေပြရုံနဲ့ phD မရသင့်ပါဘူး။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ phD ရနေတဲ့သူတွေအတန်းထဲမှာ Roll 1 to5လောက်ရခဲ့ရင် ဒါကို အကျယ်ချဲ့ပြီးမပြောပါဘူး။ တစ်ချိန်ကြမှ မင်းဘာကောင်လဲ ငါဘာကောင်လဲတွေဖြစ်ကြရရင် ကိုယ့်အရှက် ကိုယ်ခွဲသလိုဖြစ်နေမှာစိုးလို့ပါ ....။ Selected Few ထဲမှာ ဘယ်နှစ်ယောက်ကို နိုင်ငံက ပြန်ရလိုက်သလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်းဟာ ခေါင်းရှိတဲ့သူတွေအတွက်ပါ။ ပညာရေးစနစ်အတွက် အချိန်ပေးဖို့ ဘယ်လောက်လိုသလဲဆိုတာ သင်ရိုးတွေ မပြင်ခင် အရင်ဆုံးလေ့လာသင့်တဲ့အချက်ပါ။ ခေါင်းမရှိတဲ့အလုပ်တွေများများလုပ်တဲ့နိုင်ငံဟာ ဆင်းရဲတတ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ကတော့ ဆင်းရဲတာပပျောက်တာ မပပျောက်တာထက် ပေမီဒေါက်မီ ပညာတတ်တွေမွေးထုတ်ဖို့ ပိုအရေးကြီးတယ်လို့ထင်ပါတယ်။ ရေနစ်သေဆုံးမှုများတဲ့နေရာမှာ ကယ်ဆယ်ရေးဟာ ရေတိုနည်းစနစ်ပဲဖြစ်ပြီး ရေကူးသင်ပေးဖို့နဲ့ ခိုင်ခံ့တဲ့လှေသင်္ဘောတွေ ပံ့ပိုးနိုင်ဖို့ဟာ ပိုအရေးကြီးပါတယ်။ ရေရှည်မှာ ပညာတတ်တွေဟာ ပညာတတ်တွေအလုပ်ကိုလုပ်ပါလိမ့်မယ်။ ပညာတတ်တွေကို သူ့လောက် မကျွမ်းကျင်တဲ့သူတစ်ယောက်က လာရောက်အားပေးတယ်ဆိုတာမျိုးပဲဖြစ်သင့်ပါတယ်။ လိုအပ်သည်များ ... စသဖြင့် မဖြစ်သင့်ပါဘူး။ အနည်းဆုံးတော့ မာလ၀ီမှာတော့မဖြစ်သင့်ဘူးပေါ့လေ။ ဟဲဟဲဟဲ ....။
To buildaunity in purpose, thinking need to change, not just within the development agencies but among the wider electorates whose views shape what is possible. Without an informed electorate, politicians will continue to use the bottom billion merely for photo opportunities, rather than promoting real transformation.
ဟုတ်သလိုလိုပဲနော် ...။ ဒီလိုကိစ္စမျိုးရှိသလားလို့ စာရေးသူကို ပြန်မေးချင်ပါတယ်။ (ကြုံတုန်း ဂျူးစာအုပ်ကိုဝေဖန်သွားတဲ့ ငနဲလေးတွေကိုလည်း ဒီစာအုပ်ကိုပါ ဆက်ပြီးဝေဖန်ပါလို့ အကြံပြုပါတယ်။ )
အာဖရိကမှာတော့ စစ်တပ်အသုံးစရိတ်တွေထဲကို တစ်ချို့တစ်ဝက်ရောက်ကုန်းပြီးကျန်တဲ့ထောက်ပံ့ကြေးတွေဟာ ကမ္ဘာ့တိုက်ကြီးများကို ရောက်ခဲ့ဖူးလေကုန်သတည်းတဲ့ ...။ အာဖရိကက ယုံကြည်စရာမကောင်းတဲ့ နိုင်ငံလေးတစ်ခုမှာတော့ ဒီလိုဖြစ်လို့မွဲနေတာဖြစ်မယ်။
၁။ ဆင်းရဲမှုဇယားရဲ့ အောက်ဆုံးမှာရှိနေတာ လူသန်းတစ်ထောင်လောက်ပဲ။
၂။ လုပ်နည်းကိုင်နည်းမှားနေသေးလို့ မတိုးတက်သေးတာ။ တိုးတက်လာတာနဲ့ချက်ချင်း ချမ်းသာလာနိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေဖြစ်နိုင်တယ်။
၃။ ကိုယ့်နိုင်ငံအတွက် ကိုယ်မှမလုပ်ရင် ဘယ်သူမှမလုပ်ပေးဘူး။
၄။ ကိုယ်ပညာတတ်ဖို့ဟာ ကိုယ့်တာဝန်ဖြစ်တယ်။
၅။ ကိုယ်လုပ်နိုင်တာကိုယ်လုပ်ပြီး ကိုယ်မလုပ်နိုင်တာကို အာမချောင်တာဟာ အကောင်းဆုံးကူညီတာဖြစ်တယ်။
၆။ မြန်မာနိုင်ငံသားတိုင်းဟာ မြန်မာပြည်ကို ပိုင်ဆိုင်တယ်။ (ငါတို့နိုင်ငံက Myanmar ၊ Burma မဟုတ်ဘူး ... Burma ကဆင်းရဲတယ်။)
၇။ တကယ်လို့ သင်ဟာ နိုင်ငံအတွက် တစ်ခုခုလုပ်လို့ရတာ လုပ်မယ်ဆိုရင် ဘာလုပ်ချင်သလဲ ဆိုတဲ့မေးခွန်း ...။
အဲဒီ ၇ ချက်ကိုပဲ ပြောချင်တာပါ။ ကျန်တာတွေကတော့ လမ်းချော်သွားတာတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဆုံးအထိ ဖတ်ဖြစ်တဲ့လူတိုင်းကို ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လူငယ်တွေအတွက် စာရေးဖို့ရွေးချယ်လိုက်တာကို ပျော်ရွှင်ပါတယ်။ တစ်နေ့နေ့မှာ သူတို့တွေဟာ ဒီစာတွေကိုဖတ်ရပြီး တစ်ခုခု အကျိုးပြုတာတွေလုပ်ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့လဲ အခုကတည်းက ယုံကြည်ပါတယ်။ ဘ၀တိုတိုလေးထဲမှာ လူတွေကို မုန်းနေရတာတွေမရှိချင်ပါဘူး။ မကောင်းတဲ့သူလည်း သူ့ကတိနဲ့သူ့လားရာသူသွားပါစေ။ ကောင်းတဲ့သူတွေလည်း ကိုယ်လုပ်နိုင်သလောက် လုပ်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆန္ဒပြုပါတယ်။
ဘ၀မှာ အဓိပ္ပာယ်ရှိတာတွေပဲလုပ်ဖို့ အားပေးတဲ့အမေ၊ NGO စော်နံတာတွေရေးတဲ့ ဆရာမဂျူး နဲ့ စာအုပ်ဝယ်ဖို့ ခြေထောက်ညောင်းခံ၊ ခေါင်းကိုက်ခံ လိုက်ပေးတဲ့ TT နဲ့ YM ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
လူငယ်တွေအတွက်ဆိုလို့ ဖတ်ဖို့အားခဲနေတဲ့မဒါလည်း အသက် ၁၇ နှစ်မပြည့်သေးလို့ ဖတ်လို့မရကြောင်းအကြောင်းကြားပါတယ်။
အဆစ်ပြောချင်တာကတော့ ဆရာအော်ပီကျယ်ရဲ့ ကာတွန်းလေးတစ်ခုအကြောင်းပါ။
စိတ်ပညာမှာ ကိုယ်အဆင်မပြေရင် ကိုယ့်ထက်ပိုပြီး အဆင်မပြေတဲ့သူတွေကို ကြည့်ပြီး အားတင်းရတယ်ဆိုတာကို ဆရာအော်ပီကျယ်က ကာတွန်းဆွဲတာပါ။
ကာတွန်းထဲမှာ လူတစ်ယောက်က အဆင်မပြေလို့စိတ်ညစ်နေတော့ သူ့သူငယ်ချင်းက ပြောတယ်။ ကိုယ့်ထက်ပိုပြီး အဆင်မပြေဖြစ်နေတဲ့သူတွေကြည့်စမ်းပါ ကိုယ်ကတော်ပါသေးတယ်လို့တွေးပေါ့လို့ပြောပါတယ်။
အဲဒီတော့ စိတ်ညစ်နေတဲ့သူက အဲဒါပိုဆိုးတာပေါ့ကွ .. ငါ့လောက်အဆင်မပြေဘဲပိုဆိုးနေတာတွေက ငါ့အမျိုးတွေပဲဖြစ်နေတယ်တဲ့။
မြန်မာနိုင်ငံအကြောင်းမပြောဖြစ်တာက ကိုယ့်ထက်ပိုပြီးအဆင်မပြေတာက ကိုယ့်အမျိုးတွေဖြစ်နေတတ်လွန်းလို့ပါ။ .... လူတစ်ယောက်ကို ဖြစ်ဖြစ် အဖွဲ့အစည်းကိုဖြစ်ဖြစ် ထိခိုက်နစ်နာစေချင်တဲ့စိတ်လည်းမရှိပါဘူး ...။ အားလုံးအဆင်ပြေစေချင်ပါတယ်။ ရဟန်းမဟုတ်ဘဲ လူဝတ်လဲတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေ ကျွန်တော်ဘာမှစိတ်မ၀င်စားပါဘူး။ လူကောင်းလူဆိုးကို ပိုင်းခြားတာဟာ သူ့ရဲ့ စိတ်ဓာတ်နဲ့လုပ်ရပ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းတာကို လုပ်နေတဲ့အခိုက်မှာတော့ ဘယ်သူမဆိုလူကောင်းပါပဲ။ စိတ်ကောင်းနဲ့လုပ်လိုက်တဲ့ အလုပ်ကောင်းတွေကြောင့် လူကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
တချိန်မှာ ... အထူးသဖြင့်သေခါနီးအချိန်တွေမှာ ကိုယ်လုပ်ခဲ့တာတွေအတွက် နောင်တမရဘဲ စိတ်အေးလက်အေးသေခွင့်ရချင်တာ လူတိုင်းပါပဲ။ ... သေချာတာကတော့ ကိုယ်ပြုသောကံ ပဲ့တင်သံ ... ကိုယ့်ထံပြန်လာမည်...... ဆိုတာပါပဲ ....။
အပိုင်း ၁ လို့တပ်ထားလိုက်ပါပြီ ...။ ဆက်ရေးထားတာတွေ အဆင်ပြေတဲ့အခါ တင်ဖြစ်ပါမယ်။
31 ရက်နေ့ကနေ ၁၅ ရက်နေ့အထိ ခွင့်ယူခါနီး .... အလုပ်လက်ကျန်တွေ ရှင်းနေရတဲ့အတွက် ... အခုလို ပို့စ်တိုတိုလေးတွေရေးနေရတာ နားလည်ပေးကြပါ ....။